ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ဒု ) | Layma's World
« ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ပ ) Who broke your heart ? »
Jerry, on July 23, 2007 at 11:31 am said:
“အုပ်စုဖွဲ့ တာက အပြစ်ကြီးတယ်” …. ဟား …ဟား … ဟား … သိပ်ကြောက်သွားသလား ပါချုပ်ကြီး … မကြောက်ပါနဲ့ … လေးမတို့ အုပ်စုဖွဲ့တာ ထုတ်စည်းတိုးမလို့ပါရှင့် ….
တော်တော် ဆိုးခဲ့တဲ့ အာခီကျောင်းသူတွေပဲဗျ … ၁၉၂၀ ကျော်နှစ်များလောက်ကသာဆို အဲဒီဆရာမနဲ့ ဆရာတွေတော့ လွယ်မယ်မထင်ဘူး … မလေးမတို့လူစုက ပြောလို့မရဘူးလေ …
သိတယ်မဟုတ်လား …. အုပ်စုဖွဲ့ ကျောင်းရှေ့သွားပြီး
“ သပိတ် သပိတ် မှောက် မှောက် ” “ ဂျူရီ ဂျူရီ ရွေ့ ရွေ့ ” ဆိုပြီး သွားလုပ်မယ့် သဘောရှိတယ် … တောခိုတာတွေ ပုန်းအောင်းလှုပ်ရှားတာတွေနဲ့ ယူဂျီသဘောတွေလည်း ပါသေးတယ် …
အင်း … တော်ပါပြီလေ … ဆက်မကျပ်တော့ပါဘူး … အဟဲ … 😛 ပြန်မတိုင်ကြေးနော် …
Layma, on July 26, 2007 at 1:19 pm said: